DAAWO MUUQAAL:-Wareysi xiiso leh oo lala yeeshay Ra’isulwasaarihii hore ee Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) | Saadaal Media
Sep 11, 2019 - 1 Jawaab
Ra’isulwasaarihii hore ee soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo haatan ku sugan dalka ingiriiska ayaa waxaa wareysi xiiso leh la yeeshay Wariye Durraan Cabdullaahi Shurwac oo ka tirsan Telefeshinka Caalamiga ah Horn Cable.
Waxaa Mudane Shirdoon uu labadii sano oo ugu dambaysay wax ka baranayay Jaamacadda caanka ah ee Oxford ee dalka Ingiriiska, kaasoo wareysigiisa ku sheegay inuu waxbarashadiisa ku soo dhamaystay si farxad iyo guulba ah.
Wareysigaan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayuu Mudane Shirdoon ku sheegay in wax akhriska iyo waxbarashadu ay ka mid yihiin hiwaayaddiisa u gaar ah, kaasoo sheegay in sababta ugu wayn ee uu u joogay Oxford ay ahayd inuu aqoontiisa baahiyo, khibradiisana kordhiyo, isla markaana daraasaad madaxbanaan ku sameeyo masalooyin badan oo ku saabsan dawladnimada iyo dalalka burburka ka soo baxay.
Dr. Cabdi Faarax Shirdoon oo ahaa Ra’isulwasaarihii ugu horeeyay ee hoggaamiya xukuumad rasmi ah oo aan ku meelgaar ahayn ayaa ugu dambayn wareysigiisa si kooban uga hadlay golihii wasiirada ee ugu yaraa ama koobnaa ee uu soo dhisay iyo waxyaabahii u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid wakhtigii uu ahaa Ra’isulwasaaraha xukuumadda.
HOOS KA DAAWO WARAYSIGA DR. SAACID SHIRDOON
Lacagtii uu ka soodhacay ummadda soomaaliyeed ayu hadda si ku takrifal ah ugubaashaalaya